तिहारमा मासुका परिकार खाँदा केमा ध्यान दिने ? कसरी बच्ने बिरामी हुनबाट ? – Etajakhabar
तिहारमा मासुका परिकार खाँदा केमा ध्यान दिने ? कसरी बच्ने बिरामी हुनबाट ?
नेपालीहरूको ठूलो चाड तिहार सुरु भइसकेको छ । चाडबाडको समय मानिसहरू घरमा बसीबसी मिठामिठा खानेकुरा खाने र रमाइलो गर्ने गर्छन् । यस्ता चाडमा मासु पनि अत्यधिक खाइने परिकारमा पर्छ । धेरै मासु खाँदा कतिपय मानिस विभिन्न स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित बन्ने गरेका छन् । तर, के कारणले समस्या आइलाग्यो भनेर ख्याल गर्दैनन् ।
हामीले विभिन्न चिकित्सकको सल्लाह समेटेर चाडबाडमा कस्तो मासु खाने, कसरी खाने, कति खाने, धेरै भए के असर पर्छ भन्ने विषयमा कुरा गरेका छौं । ——— दसैंको रौनक घरसम्मै आइपुगेको छ । मानिसहरू बाहिरबाट दसैंका लागि घर जाने क्रम पनि बढिरहेको देख्न सकिन्छ । रातो टीका र जमराको पर्वको रूपमा चिनिने दसैंमा खानपानको पनि उत्तिकै महत्व छ । दसैं भन्नेबित्तिकै मासुको कुरा आइहाल्छ । दसैंमा पेटभरि मासु नखाए कहिले खाने ? भन्नेहरू पनि भेटिन्छन् । त्यसैले दसैं या अन्य चाडबाडमा मासु र अरू खानेकुराको मात्रा नमिल्दा स्वस्थ मानिस पनि बिरामी हुने गर्छन् । भेटघाट, रमाइलो भन्दा पनि स्वादको पछाडि लागेर खानपिनमा सामान्य ध्यान नदिँदा धेरै जना दसैंका समयमा अस्पतालमा पुग्ने गर्छन् ।
खानपिनमा सामान्य ध्यान नदिँदा दसैंको समयमा उच्च रक्तचाप, मुटु, मधुमेह र पेटजन्य समस्याका साथै झाडावान्ता हुने, कब्जियत हुने, युरिक एसिड बढ्ने तथा ग्यास्ट्रिकका बिरामीको संख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि हुन सक्छ । एकै पटक धेरै मासु पकाएर धेरै दिनसम्म खाँदा त्यसबाट रोगलाई बढावा दिनेबाहेक अन्य केही पौष्टिक पोषण नपाइने चिकित्सकहरू बताउँछन् ।
रातो मासु पोलेर, धेरै भुटेर वा तारेर खाँदा क्यान्सरको खतरा बढ्न सक्छ । दसैंमा मासु खाँदै नखाने भनेर रोक्न सकिँदैन । तर खाँदा सावधानी अपनाएर खानुपर्छ । बासी नखाने, मासु मात्र नखाने, त्यसमा सागसब्जी र गेडागुडी पनि समावेश गर्ने । माछाको मासुले बरु त्यति असर गर्दैन । क्यान्सरका बिरामीले खसीको मासु एकै पटक धेरै खानु हुँदैन । साधारण तरिकाले पकाएको थोरै मासु मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ । पोलेको, डढेको वा धेरै भुटेको मासु खाँदै नखाए स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ ।
दसैंमा खानैपर्छ भनेर खसीको मासु एकै पटक धेरै खानु पनि राम्रो मानिँदैन । एक छाकमा तीन–चार टुक्रा खाने, कोक, फेन्टा र अन्य जुसभन्दा सफा पानीलाई प्राथमिकता दिने, हरियो तरकारीलाई पनि खानामा समावेश गर्ने र मासुको मात्र भर पर्नु हुँदैन । अनियन्त्रित खानपानले शरीरमा अतिरिक्त बोसो जम्मा भई मधुमेह मात्र नभई अन्य रोगलाई पनि बढावा दिने भएकाले मासु खाँदा ध्यान दिन आवश्यक छ ।
मासु पकाएर धेरै समय फ्रिजमा राख्दा पनि ब्याक्टेरियाको संक्रमण हुन सक्छ । राख्ने उचित वातावरण नमिल्दा पनि कतिपय अवस्थामा मासु खानयोग्य नहुने चिकित्सकको भनाइ छ । त्यसैले चाडबाडका नामका धेरै मासु खाने वा स्वादका लागि अत्यधिक मरमसला र तेल हाल्ने गर्नु हुँदैन । मासु मात्रै खाने बानीमा सुधार गरी सागपात, टुसा उमारेको गेडागुडी, सलाद र पर्याप्त पानी पिउने हो भने रमाइलो वातावरणमा स्वस्थ भई दसैंमा रमाउन सकिन्छ। स्वास्थ्य खबरपत्रिका
प्रकाशित मिति: मंगलबार, आश्विन ३१, २०७४ समय: ७:१२:५२